You searched for - Myanmar Thadin
November 29, 2021 by Myanmar Thadin
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ .. ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံး အကြောင်း ယွန်း ရှင်းပြပါရစေ ကိုစည်သူဝင်းနဲ့ပြောတဲ့ ယွန်း Acc က Hack ခံရတာ နှစ်နှစ်ရှိပါပီ . Hack တဲ့သူက ယွန်းကို ကလေးသရုပ် ဆောင်ဘဝထဲက အားပေးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးလို့ သာသိရပီး သူ့မျက်နှာကို ယွန်း မမြင်ဖူးပါဘူး . . … ပရိသတ်ကြီးကို Hack ခံရ တာ မပြောဖူး ဆိုတာက ယွန်းလို ခေတ်ပညာ တတ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ Hack ခံရတာ မလုပ်တတ် ဖူးလားလို့ အထင်သေးခံ ရမှာ စိုးလို ပါ .ကိုစည်သူဝင်းနဲ့ စကား လာပြော တာက Hack မလေးပါပဲ . … Read more
Categories ဆယျလီ သတငျး Leaveacomment
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ .. ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံး အကြောင်း ယွန်း ရှင်းပြပါရစေ . . . ကိုစည်သူဝင်းနဲ့ပြောတဲ့ ယွန်း Acc က Hack ခံရတာ နှစ်နှစ်ရှိပါပီ . Hack တဲ့သူက ယွန်းကို ကလေးသရုပ် ဆောင်ဘဝထဲက အားပေးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးလို့ သာသိရပီး သူ့မျက်နှာကို ယွန်း မမြင်ဖူးပါဘူး . . … ပရိသတ်ကြီးကို Hack ခံရ တာ မပြောဖူး ဆိုတာက ယွန်းလို ခေတ်ပညာ တတ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ Hack ခံရတာ မလုပ်တတ် ဖူးလားလို့ အထင်သေးခံ ရမှာ စိုးလို ပါ .ကိုစည်သူဝင်းနဲ့ စကား လာပြော တာက … Read more
အပြီးသတ်အမိန့်တွင် ကာလရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံရနိုင်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုတချို့ (ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး) ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသည့်အရပ်သားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဂတိလိုက်စားမှု၊ မဲလိမ်မှု နှင့် ကိုဗစ်စည်းကမ်းများကို ချိုးဖေါက်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံနေရပြီး အပြစ်ရှိသည်ဟု စီရင်ဆုံးဖြတ်ခံရလျှင် ထောင်ဒဏ်နှစ်ပေါင်းများစွာ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည် ဖြုတ်ချခံအရပ်သားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက စွဲဆိုထားသည့် အမှုတသီတတန်းထဲမှ အမှုတချို့ကို အင်္ဂါနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၃၀) တွင် အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကျန်ရှိနေသေးသည့် ဘ၀သက်တမ်းကို ထောင်တွင်းတွင်ပင် ကုန်ဆုံးနိုင်ခြေရှိနေသည် ပြည်တွင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ စာရင်းများအရ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသည် လူ ၁,၂၀၀ ကျော်ခန့်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ ၁၀,၀၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည် စစ်တပ်အားဆန့်ကျင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ထင်ရှားသည်ဟုဆိုကာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ကျခံရနိုင်သည့်အနေအထားနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် ၄င်း၏ပုံရိပ်ကောင်းကို ပယ်ရှားချင်၍သာ … Read more
Categories ကွားသိသမြှ Leaveacomment
ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် ကို စစ်ကောင်စီစစ်တပ်၏ အမြောက်တပ်မိသားစုမှ ငွေကျပ် ၂ သိန်းလှူ 29 Nov 2021၊ ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF B -02 ကို စစ်ကောင်စီတပ် လက်အောက်ခံ အမြောက်တပ်မိသားစုက နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ် ၂ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း KNDF က ယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF B -02 ၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် KNDF B-02 မှ အလှူငွေ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် တိတိ အား ကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံရရှိပါသည် လာရောက်လှူဒါန်း ပေးသော အနောက်ရိုးမ အမြောက်တပ်မိသားစု မာက်စမ်း အား အထူးကျေးဇူး တင်အပ်ပါသည် ဟု ရေးသားထားသည် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အခြားဒေသအသီးသီးရှိ … Read more
ကျည်မှန်သွားတဲ့အကြောင်း ဟာသနှောပြီးရှင်းပြနေတဲ့ PDF လူငယ်လေး (ရုပ်သံ) ပြောပြနေတာလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ဘေးက​င်းပါစေခလေးတို့ရေ အမြဲတမ်း လေးစားလျှက်ပါ ဘေးကင်းကြပါစေ တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်မြင်ကြပါစေ ကျည်မှန်သွားတဲ့အကြောင်း ဟာသနှောပြီးရှင်းပြနေတဲ့ PDF လူငယ်လေး (ရုပ်သံ) ပြောပြနေတာလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ဘေးက​င်းပါစေခလေးတို့ရေ အမြဲတမ်း လေးစားလျှက်ပါ ဘေးကင်းကြပါစေ တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်မြင်ကြပါစေ ကျည်မှန်သွားတဲ့အကြောင်း ဟာသနှောပြီးရှင်းပြနေတဲ့ PDF လူငယ်လေး (ရုပ်သံ) ပြောပြနေတာလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ဘေးက​င်းပါစေခလေးတို့ရေ အမြဲတမ်း လေးစားလျှက်ပါ ဘေးကင်းကြပါစေ တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်မြင်ကြပါစေ ကျည်မှန်သွားတဲ့အကြောင်း ဟာသနှောပြီးရှင်းပြနေတဲ့ PDF လူငယ်လေး (ရုပ်သံ) ပြောပြနေတာလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ဘေးက​င်းပါစေခလေးတို့ရေ အမြဲတမ်း လေးစားလျှက်ပါ ဘေးကင်းကြပါစေ တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်မြင်ကြပါစေ ကျည်မှန်သွားတဲ့အကြောင်း ဟာသနှောပြီးရှင်းပြနေတဲ့ PDF လူငယ်လေး (ရုပ်သံ) ပြောပြနေတာလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ဘေးက​င်းပါစေခလေးတို့ရေ … Read more
အမျိုးသမီးတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ခေါင်းအစခြေအဆုံး လှပလာစေမယ့်နည်းလမ်း
လူ တိုင်း လှ ချင် ကြ ပါ တယ်။ တ နေ့တာ လုံး မှာ လူ ကို လန်း လန်း ဆန်းဆန်း နဲ့ ဆွဲ ဆောင် မှု ရှိ ရှိ ဖြတ် သန်းနိုင် ဖို့ အ တွက် ဆို ရင် မျက် နှာ၊ ဆံ ပင်၊ သွား၊ ခြေ ထောက်၊ လက် စ တဲ့ တစ် ကိုယ် လုံး လှ ပ နေ ဖို့ လို အပ် ပါတယ် …။ အ လှ အ ပ အ … Read more
Categories အထှထှေဗေဟုသုတ Leaveacomment
EP နဲ့ ကျောင်းပြီး ထားတဲ့PĐF လေးတွေ တောထဲမှာ ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်ပြီး power bank တွေ အားသွင်းနေ(ရုပ်သံ)
ကြင်စိုးရေ မင်းရဲ့ မြေ အောက် လျှပ်စစ် ရထား တော့ မသိဘူး..🤧 တောထဲမှာ ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်ပြီး power bank တွေ အားသွင်းနေရပြီ.. 😏 တော်သေးတယ် EP နဲ့ ကျောင်းပြီး ထားတဲ့ PĐF လေးတွေ ရှိနေလို့…😊 ကြင်စိုးရေ မင်းရဲ့ မြေ အောက် လျှပ်စစ် ရထား တော့ မသိဘူး..🤧 တောထဲမှာ ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်ပြီး power bank တွေ အားသွင်းနေရပြီ.. 😏 တော်သေးတယ် EP နဲ့ ကျောင်းပြီး ထားတဲ့ PĐF လေးတွေ ရှိနေလို့…😊 ကြင်စိုးရေ မင်းရဲ့ မြေ အောက် လျှပ်စစ် … Read more
အာဏာသိမျးခံလိုကျရတဲ့နကေ့တညျးက ခါးကြိုးရကျနဲ့ သမီးလေးနှဈယောကျကို ခြီပွီး ထှကျပွေးခဲ့ရတာ- ခဈြသုဝေ အဆိုတျောသရုပျဆောငျ ခဈြသုဝဟော မွနျမာနိုငျငံမှာ အာဏာသိမျးမှုဖွဈစဉျ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့နကေ့စပွီး သမီးလေးနှဈယောကျကို ခြီကာ ထှကျပွေးခဲ့ရကွောငျး၊ (၈၈) အရေးအခငျးတုနျးက သူက(၄) နှဈအရှယျဖွဈခဲ့သလို အခုအာဏာသိမျးခံလိုကျရခြိနျမှာလညျး သမီးလေးနှဈယောကျက (၄) နှဈအရှယျလေးတှဖွေဈတာကွောငျ့ သမီးလေးတှအေတှကျ စိတျမကောငျးအတျောလေးဖွဈမိကွောငျး၊ မိဘနှဈပါးရဲ့ တျောလှနျရေးစိတျဓါတျပွငျးထနျမှုကွောငျ့ သမီးလေးတှေ ဒုက်ခတှနေဲ့ ရငျဆိုငျ နရေကွောငျးတှကေို ပွောပွလာပါတယျ အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့နေ့ကတည်းက ခါးကျိုးရက်နဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ချီပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ- ချစ်သုဝေ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ကစပြီး သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ချီကာ ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း၊ (၈၈) အရေးအခင်းတုန်းက သူက(၄) နှစ်အရွယ်ဖြစ်ခဲ့သလို အခုအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရချိန်မှာလည်း သမီးလေးနှစ်ယောက်က (၄) နှစ်အရွယ်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် သမီးလေးတွေအတွက် စိတ်မကောင်းအတော်လေးဖြစ်မိကြောင်း၊ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ … Read more
ပရိသတ်တွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာ.. မယုံနိုင်အောင် ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ ရော့ခ်ဘုရင်ကြီး လေးဖြူ..
အဆိုတော်‌လေးဖြူကတော့ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ အမိုက်စားသီချင်းတွေကြောင့် ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိ ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ သူပါဝင်တဲ့ Iron Cross band ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်ကတည်းကနေ အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် နာမည်ကျော် ရော့ခ် အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သည့် အငဲ ၏ အစ်ကိုရင်းဖြစ်တဲ့ လေးဖြူကတော့ Iron Cross Band နှင့်အတူ စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲများစွာ သီဆိုလာခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Iron Cross ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လေးဖြူရဲ့ သီချင်းတွေဟာ လူငယ်၊ လူကြီးတွေရဲ့ အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျခဲ့ပြီး ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ အောင်မြင်မှုရဲ့ အထွဋ်အထိပ်ထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် အဆိုတော်ကြီးတွေလို့ တင်စားရလောက်အောင် ဂီတနယ်ပယ်မှာ ဝါရင့်အဆိုတော်တွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် အဆိုတော် လေးဖြူကတော့ … Read more
ပျော်စရာဆိုလို့ဒါပဲရှိတာကြောင့်သေနတ်ကြီးတွေကိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်နွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းနဲ့ကနေကြတဲ့PDFလူင ယ်လေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တောထဲဝင်ပြီးအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကတော့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဆောင်းရာသီလည်းရောက်လာပြီဖြစ်လို့လူငယ်လေးတွေကတော့ တောတောင်ထဲမှာချမ်းစိမ့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်းပြည်သူတွေကပြည်မကြီးထဲမှာမိုးကြို က်သလောက်ရွာပြီးတောတောင်ထဲမှာမရွာပါနဲ့ဦးလို့ဆု တောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ပြ ည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေလိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းစေတနာရှင်တွေကလှူဒါန်းပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကတော့ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိကြလို့ဘယ် လိုဒုက္ခမျိုးကိုမဆိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့အတူနွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်နေရမယ့်အခုလိုအချိန်မှာအများအကျိုးအတကတောတောင်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ တောထဲမှာ ရှိနေတဲ့ PDFလေးတွေရဲ့ ပုံတွေထဲမှာ ဒီပုံလေးကိုတွေ့တော့… ရင်ထဲ မှာ…ခံစားရတယ် ငါတို့ခလေး…. တွေ… အနာဂတ်တွေ လှပပါစေ…ကောင်းမွန်နွေး ထွေး တဲ့ နိုင်ငံ တော်သစ်…စီသို့ အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင် ရပါစေ… အောင်မြင်ရပါစေ….. Unicode, ပြျောစရာဆိုလို့ ဒါပဲရှိတာကွောငျ့ သနေတျကွီးတှေ ကိုငျပွီးခန်ဓာကိုယျနှဲ့နှဲ့နှောငျးနှောငျးနဲ့ကနကွေတဲ့PDFလူင ယျလေးတှရေဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျ ပွညျသူတှကေိုကာကှယျမယျဆိုတဲ့စိတျတဈခုတညျးနဲ့ တောထဲဝငျပွီးအပွငျးအထနျလကေ့ငျြ့နကွေတဲ့လူငယျလေးတှကေတော့ အားသှနျခှနျစိုကျ ကွိုးစားနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာ ဆောငျးရာသီလညျးရောကျလာပွီဖွဈလို့ လူငယျလေးတှကေတော့ တောတောငျထဲမှာခမျြးစိမျ့နမှောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျးပွညျသူတှကေပွညျမကွီးထဲမှာမိုးကွို ကျသလောကျရှာပွီး တောတောငျထဲမှာမရှာပါနဲ့ဦးလို့ဆု တောငျးနကွေတာဖွဈပါတယျ။ စဈဘေးရှောငျတှနေဲ့ပွ … Read more